Ikhaya » izithuba » LGBTQ » Ukubhabha ngokuzingca: I-United Airlines, Chase kunye neVisa inkxaso ye-LGBTQ + ukulingana
Iindaba zeenqwelo moya • Iindaba zeAnga • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Iindaba Zamalungelo Oluntu • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • LGBTQ • omnye • Abantu benza iindaba • Iindaba ezijongene noKhenketho • Iindaba zoKhenketho • Intetho yezoKhenketho • Iindaba zothutho • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ze-USA
Ukubhabha ngokuzingca: I-United Airlines, Chase kunye neVisa inkxaso ye-LGBTQ + ukulingana
Ulungelelwaniso olumanyeneyo lweMileagePlus Visa Cardmembers bafumana iimayile ezintlanu zedola nganye enikelwe kwizibonelelo ezixhasa uluntu lwe-LGBTQ + ukuya kuthi ga kwi-1,000 XNUMX lekhadi elifanelekileyo.
Iprojekthi kaTrevor: Elona lizwe likhulu lokuthintela ukuzibulala kunye nombutho ongenelelo ngoncedo kubantu abancinci be-LGBTQ +
Iphulo lamaLungelo oLuntu: Umbutho osebenzela ukudala umhlaba apho abantu be-LGBTQ + baqinisekiswa ngokulingana kwaye bamkelwe njengamalungu apheleleyo oluntu ekhaya, emsebenzini nakulo lonke uluntu
I-StartOut: Ukungenzi nzuzo ngeenjongo zokunyusa inani, iyantlukwano kunye nefuthe labarhwebi be-LGBTQ + kunye nokwandisa amabali abo ukuqhuba ukuxhotyiswa koqoqosho loluntu
Ukubhiyozela kunye nenkxaso yeNyanga yoKhukhumala, United Airlines, Chase kwaye ivisa bayasebenzisana ukuvuza amalungu eKhadi leVisa eManyeneyo anikela kwimibutho ye-LGBTQ + engenzi nzuzo. Phakathi kukaJuni 1 noJuni 30, 2021, abafanelekileyo be-United MileagePlus Visa Cardmember baya kufumana iimayile ezintlanu zedola nganye ukuya kuthi ga kwiidola ezili-1,000 XNUMX kwiminikelo ekhadini elifanelekileyo enikwe le mibutho ilandelayo:
Iprojekthi yeTrevor: Elona lizwe likhulu lokuthintela ukuzibulala kunye nombutho ongenelelo ngoncedo lwe-LGBTQ + abantu abancinci.
Iphulo lamaLungelo oLuntu: Umbutho osebenza ukudala umhlaba apho abantu be-LGBTQ + baqinisekiswa ngokulingana kwaye bamkelwe njengamalungu apheleleyo oluntu ekhaya, emsebenzini nakulo lonke uluntu.
QalisaOut: Ukungenzi nzuzo ngenjongo yokunyusa inani, iyantlukwano kunye nefuthe labarhwebi be-LGBTQ + kunye nokwandisa amabali abo ukuqhuba ukuxhotyiswa koqoqosho loluntu.
"Le Nyanga ye-Pride, i-United ibhiyozela unyaka wethu wonke wokuxhasa kunye nokuxhasa abasebenzi be-LGBTQ + kunye nabathengi ngokubonisa imibutho ekwabelana ngokuzibophelela kwethu ekuphakamiseni uluntu lwe-LGBTQ," utshilo uSuzi Cabo, umlawuli olawulayo we-United, ukuzibandakanya koluntu jikelele. "Siyazingca ngokusebenzisana noChase kunye neVisa ukunika amalungu ethu exabisekileyo eUnited Visa Cardmember ithuba elikhethekileyo lokuphindisa kwaye bafumane umvuzo kuthi ngenxa yegalelo labo."
Abathengi baya kufumana iimayile ezintlanu ngeedola abazinikiweyo kula makhadi alandelayo: I-United GatewaySM Ikhadi leVisa, eManyeneyoSM Ikhadi leVisa lokuKhangela, ukufuna okuManyeneyoSM Ikhadi leVisa, iklabhu emanyeneyoSM Ikhadi leVisa elingenasiphelo, iklabhu emanyeneyoSM Ikhadi leVisa, eManyeneyoSM Ikhadi leVisa leShishini kunye neKlabhu eManyeneyoSM IVisa yoShishino.
I-United izibophelele ngokuqhubekayo kwi-LGBTQ + yokulingana equka imbali yekratshi yokuqala. I-United yayiyinqwelomoya yokuqala yase-US ekuqondeni ngokupheleleyo ubuhlakani basekhaya ngo-1999 kunye nenqwelomoya yokuqala yase-US ukubonelela ngeendlela ezingezizo ezesini kuzo zonke iindlela zayo zokubhukisha. I-United nayo yayiyinkampani yokuqala kawonke-wonke eyangeniswa kwinkqubo ye-Pride Live's Stonewall Ambassador ekuboneni ukuzibophelela kwenqwelo-moya kwi-LGBTQ + ukulingana ngo-2019. Nge-EQUAL, i-LGBTQ + yeQela loShishino lweeNqwelo moya, ngaphezulu kwamalungu angama-2,600 XNUMX asebenza kunye ukuxhasa egameni Uluntu lwe-LGBTQ +, lisebenza namalungu kunye neenkokheli kwilizwe liphela ukwenza iindlela zokuhambisa izixhobo, imfundo kunye nokukhuthaza.
"Ukubhiyozela iNyanga yoKhukhumala, besifuna ukuwonga amalungu ekhadi anikezela kwimibutho ekhonza kwaye ixhase abasebenzi beLBGT +, amalungu ekhadi kunye neentsapho zabo: Iprojekthi kaTrevor, uMkhankaso wamaLungelo oLuntu, kunye neStartOut," utshilo uBrad Baumoel, intloko ye-LGBT + Imicimbi yeJPMorgan Chase. "Siyavuya ukujoyina iVisa kunye ne-United ukunikezela ngeemayile zeminikelo exhasa i-LBGT + yoluntu."
"IVisa ikholelwa ukuba uqoqosho lubandakanya wonke umntu, yonke indawo iphakamisa wonke umntu, naphina," utshilo uKirk Stuart, usekela mongameli omkhulu kunye nentloko yentengiso yabarhwebi eMntla Melika kunye nokufumana eVisa. "Sizibophelele ekusebenziseni amandla ethu kwinethiwekhi ukuxhasa uluntu lwe-LGBTQ + kunye nolunye uhlobo lwabantu ekubuyiseni kwabo ubhubhane wehlabathi nangaphaya. Ukuqhuba uthethathethwano lokuqhuba ngobuhlakani bobuchule yinxalenye ebalulekileyo yesicwangciso-qhinga sethu sokunceda abahlali bendawo ukuba baphinde baphile. ”